Henry Olonga – The Cricket Cauldron
Tag: Henry Olonga
Record Book – Best ODI bowling figures for Zimbabwe
So far, there have been five instances of a Zimbabwean bowler taking six wickets in an innings in ODI cricket, besides an instance of a bowler taking five wickets while conceding less than ten runs. On that note, we look at the six best returns by Zimbabwean bowlers in this format. 6/19 by Henry Olonga […]
Read More Record Book – Best ODI bowling figures for Zimbabwe
Specials – Best of the ODIs : India v Zimbabwe
With the three-match ODI series between hosts Zimbabwe and India getting underway today, let us go back in time to relive the most memorable ODI matches between the two nations. Since their first meeting in the 1983 World Cup, the two teams have met each other in 57 ODIs, with India winning 45 […]
Read More Specials – Best of the ODIs : India v Zimbabwe
Famous Test Matches – Pakistan v Zimbabwe, Peshawar, 1998-99
This match was momentous for resulting in Zimbabwe’s first overseas Test victory, which ultimately led to their first ever series win (though they had won the one-off home Test against India earlier in the season). Zimbabwe had their best years of Test cricket during this period and this match, played between November 27 and […]
Read More Famous Test Matches – Pakistan v Zimbabwe, Peshawar, 1998-99